प्रचण्ड- माधव ८८, ओली एक्लैको ८३ : प्रचण्ड – नेपाल गुटका लागि ओली एक्लै भारि !! – News Nepali Dainik
प्रचण्ड- माधव ८८, ओली एक्लैको ८३ : प्रचण्ड – नेपाल गुटका लागि ओली एक्लै भारि !!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: ६:३३:३८
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष शुरु भएको छ । अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय यति बेला बहसमा छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन्छन् कि दिंदैनन् ? नेकपाको औपचारिक विभाजन कसरी हुन्छ ? कांग्रेस र जसपाको भूमिका के रहन्छ ? नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रस्तुति कस्तो रहन्छ ? र बामदेव गौतमको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषय यति बेला चासोको विषय बनेको हो ।
Last Updated on: February 25th, 2021 at 6:33 am